Android Development 3: Hello World! Android Development 3: Hello World! – <Myat Min Soe />
Programming Language တစ်ခုစတိုင်း Hello World! ကို print ထုတ်ပြီးစလေ့ရှိပါတယ်။ Android ကိုလဲ Hello World နဲ့စလိုက်ရအောင်
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Android Studio Project တစ်ခုဆောက်ပြီး ပထမဆုံး Application ကို ဖုန်းပေါ်မှာ run မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android Studio ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ဘက်က recent project ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်ကရေးလက်စ project တွေရှိလို့ ပေါ်နေတာပါမဟုတ်ရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး Android SDK သွင်းပြီးပြီလားစစ်ပါမယ်။ Configure >> SDK Manager ကိုရွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်သွင်းထားတာတွေကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ System Image ဆိုတာကတော့ emulator အတွက်ဖြစ်ပြီး သွင်းစရာမလိုပါဘူး အဓိကကြတဲ့ Android SDK Tools, SDK Platform Tools, SDK Build-Tools, Google APIs, Extra ထဲကကောင်တွေကိုသွင်းထားရင်ရပါပြီ။ တစ်ခုခြင်းစီအလုပ်လုပ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
SDK Manager ကိုပိတ်ပြီး Startanew android studio project ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ကပုံစံတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖြည့်ရမှာတွေကိုတစ်ခုခြင်းရှင်းပြပါမယ်။
Application Name ဆိုတာက ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရေးမဲ့ Application ရဲ့ နာမည်ပါ။ ခုမှာတော့ စမ်းမှာမို့ Tutorial သာဖြည့်ထားလိုက်ပါ။
Company Domain ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် domain တစ်ခုပါ။ domain မရှိလဲ ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်က package name က unique ဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ့် domain ကိုထည့်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Package Name ကတော့ App တစ်ခုရဲ့ unique နာမည်ဖြစ်ပြီး Play Store ပေါ်မှာရှိတဲ့ app တွေအကုန် သီးသန့် package name ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းတော့ domain ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ Application name ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကိုထပ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် edit နှိပ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Project Location ကတော့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာသိမ်းထားမဲ့ location ဖြစ်ပြီး နှစ်သက်ရာရွေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ကိုယ် app run မဲ့ device နဲ့ အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်မဲ့ version ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Phone and Tablet ပဲရွေးပေးပါ။ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်တော့ Android wear နဲ့ tv အတွက်ရေးနည်း သင်ပေးပါမယ်။ Minimum SDK ကတော့ ကိုယ့် app run မဲ့ အနိမ့်ဆုံး SDK ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ API 14 IceCream Sandwich ကိုအနိမ့်ဆုံး support ပေးပါတယ်။ API 1 ကနေစပြီးပေးလို့မရဘူးလားလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ မရပါဘူး။ API နိမ့်လေ ရေးရမဲ့ code များလေဖြစ်မှာပါ။ API မြင့်လေ code အသစ်တွေ သုံးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ device နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဝါသနာပါလို့ အရမ်းဆင်းချင်တယ်ဆိုရင် API 10 GingerBread အထိနဲ့ အရမ်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင် API 19 KitKat လောက်အထိပဲ ထားဖို့အကြံပေးပါရစေ။ အခု Tutorial မှာတော့ API 14 နဲ့ပဲပြသပါမယ်။ Next ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်မျက်နှာမှာတော့ App အတွက် template တွေပေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ Empty Activity ကိုသာရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။ ကျန်တာတွေက Empty Activity ကနေ ကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။ Customize the activity မှာတော့ သူပေးထားတဲ့ အတိုင်းသာ အောက်ကအတိုင်းထားပြီး Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Project ဆောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပြူတာပေါ်မူတည်ပြီး ၁၅ စက္ကန့်ကနေ ၁ မိနစ်လောက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
Android Studio အောက်ဆုံးမှာ loading အဝိုင်းလေး မရှိတော့ရင်တော့ project ဆောက်လို့ပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Android Studio ခုမှစသုံးဘူးတဲ့သူများအတွက် IDE နဲ့ရင်းနီးအောင် အရင် နည်းနည်း ပါးပါးလျှောက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ပြီးသွားရင်တော့ အလယ်က text editor ကိုပိတ်ပြီး ဘယ်ဘက်ဘေးက project ဆိုတာကိုပဲဖွင့်ထားပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်ဆုံးက android_studio_run_icn ကိုနှိပ်ပြီး run ကြည့်လို့ရပါပြီ။ emulator ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားရာမှာ Developer Option ဖွင့်ပြီး USB Debugging ဖွင့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Choose Device dialog မှာ ကိုယ်ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းကိုရွေးပြီး ok လို့သာနှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းမှာ run သွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကပုံအတိုင်း ဖုန်းမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Developer Option ပျောက်နေရင် settings > about ထဲက build number ကို ၇ ချက်နှိပ်ပြီးဖော်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ပထမဆုံး Android Hello World App ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီဟာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ Android Studio Installation Process မှာ တစ်ခုခုမှားနေလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Thi August 3, 2017 3:39 pm
post ကၾကာေနလို့လား ဘာလို့လဲမသိဘူး။ ပံုေတြမ ြမင္ရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကူညီပါအံုး။